DAAWO SAWIRRO: Muxuu madaxweynaha Jubbaland ku soo arkay dekedda magaalada Boosaaso ee uu booqday? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO SAWIRRO: Muxuu madaxweynaha Jubbaland ku soo arkay dekedda magaalada Boosaaso ee...
Boosaaso (Halqaran.com) – Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe), ayaa markii ugu horreysay kormeer ku tagey Dekeda Magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari.
Axmed Madoobe ayaa Sabtidii shalay soo kormeeray qaybaha kala duwan ee Dekeda Magaalada Boosaaso, isagoo soo indha indheeyay sida ay halkaasi shaqada uga socoto.
Sidoo kale, madaxweynaha Jubbaland ayaa warbixino ka dhageystay masuuliyiinta ka hawlgala Dekeda Boosaaso, iyadoona uu booriyay sida hufan ee ay waajibaadkooda u gutaan.
Axmed Madoobe ayaa waxaa kormeerkan ku wehlinayay masuuliyiin uu ugu sareeyay Madaxweynaha Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni.
Dhanka kale, Madaxweynaha Jubbaland iyo masuuliyiintii la socotay ayaa kormeer kale ku bixiyay Xarunta Taliska Saldhiga Bartamaha ee Magaalada Boosaaso, xilli uu u kuur-gelaayay sida ay hawluhu uga socdaan.
Kormeerkan ayaa waxaa lagu sheegay mid khibrad wadaag ah, oo labada dhinac ay isaga kaashanayan xaqiijinta amniga iyo la dagaalanka kooxaha argagixisada.
Madaxda Jubbaland iyo Puntland ayaa Khamiistii Magaalada Boosaaso ka sheegay inay ka wada shaqayn doonaan arrimaha ammaanka iyo la dagaalanka argagixisada.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo booqday dekedda Boosaaso